9 / Fahin –
9 / Fahin
isticmaal kasta ama dhalmo ah oo sharaxaad ka for this page (taariikhaysan February 2018), waa tilmaamaya isha la link a si Autistan.org
Sharaxaada of autism, sida uu sheegay Ururka Safaaradda Autistan
Waxaad doonaysaa in la fahmo autism, laakiin wax kasta oo aad akhriyey ama maqlay ilaa iyo haatan u muuqataa cadda, is burinaya oo lagu qancin.
Waxaan aaminsan nahay in dadka intooda badan, kuwaas oo ka akhrisan sharaxaad ku saabsan autism, this page yeelan doonaa dareen ee ugu dambeyntii si dhab ah u fahmaan asaaska autism iyo in ay si fiican u garan "sida aad u malaynayso in" si ay u leeyihiin fikrado macquul ah cad oo ku saabsan autism, taas oo lagama maarmaan ah in si wanaagsan ku gartaan si loo sameeyo nala.
* * E0 FIKRADO hordhaca ah iyo LOO BAAHDO
Ku dhowaad dhammaan isku dayo in "sharxi autism" waa khalad, maxaa yeelay, iyagu ma ay fahmaan nooca aad u of autism.
Tan waxa u sabab xaqiiqada ah in isku day, kuwaas oo ku salaysan yihiin a "bakhaar aan autism" waxaa loo arkaa "kaliya" iyo "sax ah".
Habka ugu fiican si ay u fahmaan una sharax autism, waa in la isticmaalo hab ka mid ah fikirka autism, iyada oo aan la saamayn ku aragtiyaha iyo formatting non-autism.
dadka Non-autism hore u Arkaa nooca aan macquul ahayn oo khatar ah nidaamka bulshada caalamiga ah ee hadda jira, laakiinse iyagu ma ay "ka baxo sanduuqyada ay," kara heshiisyada iyo caadooyinka fikirka, iyo ay ku xayiran yihiin khayaal adag in naftooda.
Waxay mararka qaar Arkaa milaratigooda, laakiin ay waxba qaban karin sababtoo ah waxaa loogu bixiyey nooc ka mid ah ku dhici bulshada, iyo "fikirrada khasab" ah (sida fikradda ah in ay tahay "khasab" ah si ay isgaadhsiin iyo in la si fiican loo habeeyey bulsho ahaan, iyo haddii kale, waxaa shaki uu leeyahay dhibaato nafsi ah, taas oo ah fikrad macquul ahayn, marka aad u maleyso inay daqiiqad) ku saabsan.
dareen The "Baadi guud rasmi ah oo sax ah" abuuraa qidmeyntii ah oo ah "psychosis bulshada" Guud, kaas oo keena wax cabsi ah ka wax kasta, wax cabsi ah oo aan la garaneyn ku, diidmada si toos ah kuwa "kala duwan", ay hoos u dhacday shaqsiyaddeenna, anaanimada, Maadiga, raaxada, raaxo raaxaysi iyo saarneyn wax, taas oo horseedaysa in ay shuruudaha wax soo saarka, faa'iidada, iyo heerka "amniga" sii kordheysa sare, taas oo hagi siyaasadda dadweynaha, si xaqiraad laga tirada badan yahay dabiiciga ah (sida autism), taas oo ugu dambeyntii ka dhigaysa in ay nolosha sii kordheysa wax aan macquul aheyn.
Haddii aynu u malayno in an "autism" daacad ah, iyadoo aan loo eegin aaminsan yahay iyo heshiisyada "bulshada", mid ka mid ah si deg deg ah fahamsan yahay in nidaamka bulshada non-autism iyo "siyaabo bulsho ahaan la aqbali karo ee u malaynaya" waa khalad iyo in colaadda la sharciyada dabiiciga ah ee nolosha.
Waxa kale oo aanu fahamsanahay in sifooyinka autism iyo tayada waa si fiican oo sax ah iyo xiiso leh, laakiin waxay yihiin in colaadda la nidaamka bulshada, kuwaas oo laftiisa waa in colaadda la Nature iyo "waxa la sameeyo".
Haddii, oo kaliya haddii, aan bilaabo male ah in jidadka loo fikiro oo ka shaqeeya "caadi ah", "bulsho ahaan la aqbali karo", waa mid aad u su'aal ka, iyo inta badan aad u dhibaato, ka dibna kaliya ee aan bilaabi karaan in ay ku sugan gobolka ruux "socon" la autism, iyo mid ka mid bilaabi karaan in la fahmo.
Waayo, kanu, aad leedahay si aad illooba oo dhan fikrado waa ka soo baxaan "formatting bulshada" (taas oo si gaar ah u fududahay autism ah).
Haddii aad ogolaato in ay isku dayaan in ay ka fekeraan in sidan, ee ah "macquul ah oo daacad ah" iyo aqoonsado ayna duleella iyo absurdities ee "nidaamka non-autism," halka aad la xiisaha akhriso sharaxaad guud ee autism, in qodobbada soo socda.
Tani waxay sharaxaad of autism page autism, "at il" waa muuqashadii gaar ah oo u dhiganta ee "Ujeeddada" -G0500- ( "Sharax Autism") oo ka mid ah urur.
Macluumaadka on this page waa mid aad u aasaasi ah oo la soo saari karaa siyaabo of is dhaafsi kala duwan, isgaarsiinta iyo kulamada.
* * E1 OOTISAMKA
Autism ma aha cudur, mana set oo ah "xanuunada".
Autism waa dabeecadda dabiici ah aadanaha, gaar ahaan lagu gartaa xaqiiq tahay, runta, adigoo daahir ah, joogta ah, wada noolaanshaha, qumanaan, iyo iska caabin ah inay ka sii darto mid ah astaamahaan.
Autistic hantidaan tayo u gaar ah autism (iyo kuwa aan "xirfadaha bulshada").
Autism laftiisa waa tayo leh, maadaama ay u egtahay nooc ka mid ah is-ilaalinta iyo difaaca dabiiciga ah aadanaha ka dhanka ah waxyeelo, dhaawac, denaturation iyo khataraha dhista bulshada ugu macmal (sida codes bulshada, heshiisyada, nidaamka fikirka, fulintii hardware …) oo quudhsan tayada asalka ah ee ku wajahan bini'aadamka, oo waa sii raagayaan ee autism.
* * E2 THE "xaalada maskaxeed ee autism"
Autistic ma dareemaan baahida loo qabo ama waajib inay la xiriiraan ama ay u shaqaynaya guud bulshada ay dabiicadda Oga sida khilaafsan iyo waxyeelada loo habeeyey.
dadka Non-autism ay aaminsan yihiin in la qabsashada this waxaa lagama maarmaan ah, iyo in caddaynta ah ee caafimaadka maskaxda wanaagsan.
Sidaa daraaddeed waxay aaminsan yihiin in tixraacayo autism ay daruuri tahay waa calaamad ka mid ah doorin maskaxeed.
Waa maxay waxa loo yaqaan "danaha cidhiidhi ah" waxay diiradda saarayaan awoodda iyo qaninimada oo fikirka ah autism, oo waa u faa'iido badan ee ay "jidka nolosha gaar ah", oo ay xaq u leedahay. Laakiin sida kuwan danaha iyo damacyo aad u caadi ahayn loogu talagalay dadka aan autism, oo ayan iyagu dhammayn karin in sidaas la sameeyo, ka dibna waxa ay aaminsan yihiin in habkaani waa "dhibaato".
Guud ahaan, fikirka dadka aan autism, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in wax walba oo aan ahayn caadiga ah "caadi ah", "caadi ah", ee la xiriirta in ay koox bulsho, waa wax " xun "iyo saxiixa dhibaato shakhsi nafsi ah. Tani waa sababta dadka aan autism waa, si toos ah, dadaal kasta in uu noqdo ama ka muuqan ku haboon iyo "caadi ah" (tan iyo, ka duwan qaba cudurka autism, waxay loo xukumo oo ka dhan ah Laabeen kuwa kale oo iyaga ku xukumi haddii waxay u muuqdaan "cajiib ah").
Qaar ka mid ah "autism" waa "xanuunada" kaliya eegaysana dadka aan autism, laakiin aan ka eego dhinaca autism.
na Waayo, sidaas daraaddeed ma aha "disorder" laakiin sifooyinka autism oo waa in la ixtiraamo halkii lagu niyad jabin ama jees jeesi jireen.
Qaar ka mid ah "disorder autism" dhibaato dhab ah taas oo nolosha aad u adag, in nidaamka hadda bulshada (hogaaminayo heerarka, isdhexgalka bulshada joogto ah, oo adag iyo khiyaano, iwm).
dhibaatooyinkan waaran "barashada" qofka autism inay ogaadaan sidii ay "ku noolaan" in this "nidaamka bulshada macmal ah" gebi ahaanba inhospitable for "noqon dabiiciga ah".
ma dhibaatada ka autism, mana "disorder autism", laakiin of incomprehension iyo diidmada falcelin ku saabsan qayb ka mid ah dadka aan autism, awoodin in ay aqbalaan kuwa "non-formatted".
dhibaatada ayaa sidoo kale ku iman kartaa fikradahaaga iyo naqshado khalad aan autism, taas oo inta badan saamayn ku masaarro iyo dhigaan autism, taas oo mararka qaarkood keenta in "jaceeylka" (buunbuuniyeen oo aan loo baahnayn) in la waafajiyaa ama loo habeeyey in ay u muuqdaan .
Marka autism ah oo beenisay ama qarsado sifooyinka autism, waxaa laga yaabaa inay sababaan ah "naafo aan la arki karin" in laga hortago in dad aan autism in ay sameeyaan dadaal si ay ula qabsadaan. Tani xidhaa autism ee nooc ka mid ah "doorka xabsi ah non-autism" (waajib inay u dhaqmaan sida a non-autism), taas oo keeni kara isku dhacyada gudaha nafsi ah oo keeni kara in ay is miidaamin ah, gaar ahaan marka qofka qaba autism maleeyo " nidaamka waa la qumman yahay. "
autism qaarkood waxay leeyihiin "dhibaato" caadiga ah "non-autism", xaqiiqada ah mismatches in aan autism keentay ", ka dhigay cayn autism (inta badan si xad-dhaaf ah), iyada oo aan si dhab ah ay awoodaan in ay fahmaan" Fikirka "qabsiga, kuwaas ( tan, si kasta, waayo, intay jidka autism fikirka, iyagu ma ay noqon kartaa cudur daar).
* * E3 THE "comorbidities"
"Cuduro kale" Ereyga loola jeedaa cudurada iyo dhibaatooyinka caafimaad ee jira si weyn u joogo in dadka autism.
Dhibaatooyinkaasi waxay sidoo kale jira dad aan autism.
Dhibaatooyinkani ma aha gaar ah si autism, oo aan qayb ka ahayn autism.
Xitaa haddii ay sheegi karin in qaar ka mid ah dhibaatooyinkan waxay keeni kartaa in autism sabab ku filan oo ay doonayaan in ay ma noqon doono "saarto autism."
Waxaa hubaal ah ka caawin doono in ay xal u hesho dhibaatooyinka, kuwaas oo, guud ahaan ka heli, iyaga oo aan wax yeesho autism.
* * E4 NAAFADA
Haddii aan u isticmaalno erayga "naafo" dareenka caadiga ah "naafo", "default", "la'aan", "imperfection" jireenka qofka, autism ma aha a "naafo" maxaa yeelay, halkaasaa wax caddeyn in autism (sida aynu u qeexaan kor ku xusan ee qodobka 1) lug ah "iin ama qalad jaleelada", ka gees ilaa xad ah.
Waxaan u isticmaalaynaa ereyga "naafo" dareenka guud ee "khasaaro" ama "caqabad", ma aha in dareenka "naafo", "default" "," naafo "ama aragti kale oo naaxariista in dad "caadi" khasab "ka xoogbadan,".
Autism qaaddeen waa naafo ah, iyadoo aan loo eegin siyaabaha ay fikirka ah "naafo" waxaa lagu qeexaa (sida kor ku xusan), laakiin "la'aanta ah ee tixgelinta saxda ah ee autism by nidaamka bulshada "qalab (oo ay ku jiraan qoyska) daruuri keenaysaa in dhibaatooyin badan ee autism, taas oo looga hortago in ay helaan heerarka tayada nolosha iyo xoriyadda ku riyaaqay by dadka aan autism (nidaamka bulshada qeexayaa iyo soo rogay sharciyo in raalli intooda badan iyo dayacaad laga tirada badan yahay ee).
Tani "la'aanta tixgelin saxda ah ee autism" marka la kulmay qof qaba autism, sababa xaaladaha adag, adag, colaad, khasaaro in, ka reebid iyo ciqaabid autism: odhan karo marka dambe waa " bulsho naafada "by" ceebaha "nidaamka guud.
naafada No waa in aan keeni dareen ceeb ama inferiority.
In the case of autism (oo ay ku jiraan la'aan tixgelin sax ah oo ku lug leh curyaanimada bulsho), autistics waa macquul noqon faraxsanahay inaan noqdo "naafada ka dhanka ah nidaamka bulshada in laftiisa waa haleysan, aan macquul ahayn iyo colaadda cad la sharciyada Nature. "
In si kale loo dhigo, waxaa jira wax qalad ah la la haboona inuu shirkad keligeed kuma haboona inuu nolosha (nolosha sida ay noqon waa, oo aan artifice iyo uunu u sun ah).
Taasi waxay u dhigantaa in ay xukunka Faylasuuf Jiddu Krishnamurti ah: "Tani ma aha calaamad u ah caafimaadka wanaagsan (dhimirka), sida in ay ku habboon tahay bulshada ah oo xanuunsan."
Waa arrin aad u muhiim ah in la garan karo, si ay u joojiyaan daaweynta autism xun oo been ah, iyo in la yareeyo ama la baabi'iyo xanuun derjada gaar ah (dareenkooda fadeexado iyo "qabto dhibaato") ee dadka qaba cudurka autism, kuwaas oo ogaadeen autism iyagoo isha kuhaya qaldan muujinta caadiga ah non-autism (oo rasmiga ah) ee autism.
Fahamka waxyaalahaas ka caawisaa badan oo ay u gaaraan hadafka ah in our -G0300- Organization ( "Karaamada for autism"), iyo dabcan waxa kale oo ka caawisaa in ay qaar ka mid ah gool kale, tusaale ahaan keenaya kabano our ku jira xaalad ah fikiray fahmo autism si sax ah, iyo sidaas sameeyaan go'aamada ku haboon, cadaalad, iyo non-negative for autism.
Dabcan waxaan wax dhibaato ah, laakiin dhibaato kuwanu ma "naafada sabab u ah autism," laakiin "dhibaato ay sabab u tahay non-autism".
Markii aan bilaabaan inay fahmaan in xitaa haddii aan a "dhibaato" nidaamka bulshada, waxaan leenahay dhibaato ah kuma qabo "ayuu bakhaar dabiiciga ah", iyo in nidaamka bulshada waa dhibaato dhab ah u weyn oo halis ah oo maladjustment Nature, ka dibna waxaan bilaabi karaan in ay nolosha u arkaan hab wanaagsan, oo waxaan bilaabi karaan in ay go'aan ka nolosheena, la yar saamayn, khiyaaneeyey iyo dhibaateynayo islamarkaana uunu iyo "xanuunada Non-Autistic."
* * E5 THE "NO xaalada maskaxeed ee autism"
Fikradda ah "Xanuunka Non-Autistic", hindiseen Eric Lucas ayaa waxaa si cad u bandhigi waxa by, markii ugu horeysay, Almaty (KZ) February 12, 2016.
(Fikrad Tani waa si cadaalad ah ayaa ku dhow inay fikirka ah "neurotypical syndrome", laakiin waa badan oo sax ah.)
Aragtidani waxa ay soo bandhigaysaa eraybixinta ah si ula kac ah daandaansi ah, kaas oo ujeedadiisu tahay in la dhiiri geliyo dadka aan autism in aad ka fikirto qaladaadka nidaamyada iyo siyaasadaha ay u arkaan "sax ah" iyo "xaq".
Laakiin waa ma aha oo kaliya daandaansi ah iyo cilmi-soo celinta cadaaladda qaar ka mid ah.
Indeed, marka mid uu bilaabo inuu bartaan "rabshado Aan Autistic", mid waa run ahaantii cabsi ay tiro iyo adkaanta.
In la barbardhigo, saddex ama afar "dhibaato" yar oo leh autism u muuqdaan kuwo xad aan qiimo lahayn.
cuf Tani waa mid ka mid ah sababaha ay looga hortago in dadka aan autism in ay ka fekeraan si daacad ah iyo geesinimo leh u dhiman ee ay "nidaamka". Tani waxay ka dhigi kartaa in aad wareer oo waxaan ka dhigi nooc ka mid ah ku furid fikirka.
Waxaa jira wax kale oo muhiim ah in laga hortago in dadka intooda badan aan autism in ay ka fekeraan oo arrintan ku saabsan, waayo, waa ay "la'aanta autism." Indeed, fikirradooda oo si xoog leh u saameeyay iyo nidaamyada ku tiirsan iyo heshiisyada bulshada ay ku nool yihiin, si ay si dhib leh soo saaro kartaa in la meel fog lagama maarmaanka ah arkaan.
Eeg waxa oo dhan meel fog waa effortless for autism. Saas ma aha, waa qayb ka mid ah dabeecadda iyo tayada iyo waa in aan si joogto ah u dhawrtaan oo u aberrations gudaha u gaar ah dadkii badnaa ka mid ah "nidaamka bulshada," oo waa in khilaaf kasta oo kale (of course in, tan iyo nidaam kasta oo ka tago runta iyo xaqiiqada dabiiciga ah).
(The dhibkooda iyo Jahwareer aan la kulmaan in this garashada, ayaa tusaale u ah qaba aan ka autism sida wax diidmo ah, sida kor lagu sharaxay).
Waxa ay noqon doontaa daalin in aan halkan sharxi liiska "Xanuunka Non-Autistic", iyo sharaxaad ku muujinaya sida ay yihiin sababta keentay cudurka autism silica, iyo marka labaad, sharaxaad kuwan yihiin qoraal (Eric Lucas) buug oo, waxaan rajeyneynaa, in la sii daayo sanadkan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan u sheegi kartaa qaar ka mid ah qaybaha oo muhiim ah:
Xanuunka Autistic Non-Communication
Xanuunka Autistic Non-bulsheed
Xanuunka Ma Autistic of Danta Limited
The qalad Disorder Non-Autistic ee Autism
* * E6 Liididda joogta naturalness iyo silica
The "weerar" la odhan karaa waa "Weerarrada dareemayaasha" tan wax walba waa la gaadhsiiyey by habka dareemayaasha aragtida, iyo baaraandegi by maskaxda.
Mid ka mid ah kala saari karaa weeraro dareemayaasha weeraro "dareen" (ama "dibadda"), iyo dareemayaasha "maskaxda" (ama "gudaha").
Xadgudubyada noqon kartaa dareenka; Kuwan waxaa ka digay signalada in wax qofka waa ka baaqsiga, dhibaato ama halis ku ah deegaanka jirka. Tani ma aha arrin "dareen weyn oo ay ku dhawaaqa, nalalka, ur ama taabashada." Waa arrin dareen weyn oo ay ku iswaafaqla'aan (oo halkan waxaa loo arkaa heerka dareenka).
Xadgudubyada noqon kartaa dareenka iyo maskaxda. khalkhal Dareenka sababa qas maskaxda, sida caadiga ah la xiriira miyir (badan ama ka yar si sax ah) gudeed, cadaalad, been ah, in ay wax khaldan (taas oo ah "si toos ah diiday "by fikirka ah autism").
Weerarada noqon kartaa "maskaxda": qofka autism qabaa doonaa arkaa Jecaylkaas ah, taasina waxay keeni doontaa qas ka mid ah uu dareen isku xidhnaan iyo wada noolaanshaha (taas oo inta badan soo wici kartaa "caddaalad" ); Markaas, si dhakhso ah, qumanaan iyo daahirsanaanta nidaamka fikirka uu adkayn doonaa xiriir badan oo maskaxda ku habboon oo dhan wararka arko dhibaatada loo aqoonsaday (xidhiidhada, kuwaas oo tegi kartaa wax badan oo dheeraad ah marka loo eego dadka aan autism, kuwaas oo fikirka waxaa xadiday in ay doortaan dhowr Waddooyinkiisa pre-go'an ee "xal diyaar", si degdeg ah kalsooni, bulsho goostay oo la ansixiyey ee maaddo kasta oo la yaqaan).
Haddii qofka autism diiradda fikirradiisiina wuu ku saabsan qas ah (iyo gudeed iyo Dulmi of xaaladda), ka dibna waxaa laga yaabaa in nooc ka mid ah "falcelin silsilad" ama "resonance", sida dawan bir ah. In qof aan xanuunka autism, dhibaatada si dhakhso ah ayuuna wixiisii ​​doonaa oo illoobay, sida dhaawac on dawan caag ah.
Haddii qofka autism isku dayaya in ay muujiyaan si ay u codsadaan yareynta ama joojinta rabshooyin (taas oo had iyo jeer waxaa lagu soo rogay by deegaanka bulshada), aan la fahmi doonaa, ama aan ma aha kuwo Rumayn.
Sidaas oo dhan silica (dareenka iyo maskaxda), darey niyad ah ee awood la'aanta in la gartaa, iyo in la rumaysan yahay (e), iyo dareen cadaalad-darro iyo incoherence bulshada, oo dhan ugu danbeyn waxay keeni doontaa in an "dhibaatada autism" qofna garan doontaa (kuwa Akhriya marka laga reebo – iyo fahamsan yahay – sharaxaad of this page).
Sida aan sii gabowdid, qofka ku noolaan doonaa waayo-aragnimada daran sii kordheysa oo la mid ah, kuwa aan marnaba xal u heli doontaa (tan dadka aan autism ma karo iyo / ama ma ka dhigi doonaa dadaal si ay u fahmaan iyo s ' qabsadaan ku filan).
Oo sidaas daraaddeed, weerar kasta oo cusub, fikirka qofka ka dhigi doonaa xidhiidh la leeyahay oo dhan xadgudubyada ka hor ah nooca la mid ah, iyo sidoo kale la fikirka ah in ay jirto ma xal ama dadaal on qayb ka mid ah kale, laakiin waxaas oo dhan ugu danbeyn waxay keeni doontaa in xaalado dhibaato iyo quusan, iyo inta badan, dhibaato, qaar badan oo ka daran, kuwaas oo mararka qaarkood soo afjari karo in is miidaamin ah.
Tani waxay sidoo kale waa in ay ka fogaadaan dhacaan "marsho" oo dhammu, in dareenka xanuunka autism badan ay dabiicadda in ay tahay muhiim ah in aan si ay u bilaabaan in this soo dhowaadaan.
Tani waa mid ka mid ah sababaha badan autism sii "in ay dunida," in kastoo badan oo iyaga ka mid ah Waxyaalahaasu waa wax aan sharxi karaa, tan oo dhan "doodaha bulshada" waxay leeyihiin macnaha lahayn, qiimaha, iyo ma jiraan iyaga u.
The cutubyada soo socda, sidoo kale aad u muhiim ah, waxaa aan loogu talagalay la joogo on this page.
madaxda dowladda iyo ururada qaranka xiiseynaya waxbarashada dheeraad ah nala soo xiriiri kartaa.
* * HABEYNTA E7 Mutual
* * E8 BARASHADA OOTISAMKA MARKA
E9 * * XORRIYADDA NOLOSHA KHIBRAD gaar ah oo ASALKA AH
* * E10 saaxiibtinimo ILAALINTA, TAABBAGELINTA IYO TAAGEERO
* * E11 naturalness artificiality dhab ah HORJEEDA BULSHADA
* * E12 BAAHIDA LOO QABO OOTISAMKA IYO KALA DUWAN